哥林多後書 1 CCBT - Nnwom 1 NA-TWI
3我們主耶穌基督的父上帝當受讚美！祂是仁慈的父和賜一切安慰的上帝。 4我們遭遇任何患難，祂都安慰我們，使我們能夠用祂給我們的安慰去安慰那些在各樣患難中的人。 5正如我們多受基督所受的苦楚，也靠基督多得安慰。 6我們遭受患難，是為了使你們得到安慰和拯救；我們得到安慰，也是為了使你們得到安慰，以便你們能忍受像我們所遭遇的諸般苦難。 7我們對你們堅信不移，因為知道你們既和我們同受患難，也必和我們同得安慰。
8弟兄姊妹，希望你們知道我們在亞細亞所遭遇的苦難。那時我們承受極大的壓力，超過了我們的極限，甚至連活命的指望都沒了。 9我們心裡覺得必死無疑，這使我們不倚靠自己，只倚靠使死人復活的上帝。 10祂曾救我們脫離死亡的威脅，將來還要救我們。我們深信祂必繼續救我們。 11你們也要用祈禱幫助我們，使恩典藉著許多人的禱告臨到我們，眾人便因此而為我們感恩。
15我有這樣的把握，所以早就計劃去你們那裡，使你們有兩次蒙福的機會。 16我打算從你們那裡去馬其頓，再從馬其頓回到你們那裡，然後你們為我送行前往猶太。 17我定了這計劃，難道會反覆無常嗎？難道我是意氣用事，出爾反爾嗎？ 18我在信實的上帝面前保證：我們對你們說的話絕不會忽是忽非！ 19我和西拉、提摩太在你們當中所傳揚的那位上帝的兒子耶穌基督絕不會忽是忽非，在祂只有「是」。 20因為上帝的一切應許在基督裡都是確實的，所以我們也是藉著基督說「阿們1·20 「阿們」是「誠然如此」的意思。」，將榮耀歸於上帝。 21是上帝使我們和你們一同在基督裡信心堅固。祂差遣1·21 「差遣」希臘文是「膏立」。了我們， 22在我們身上蓋了祂自己的印記，並讓聖靈住在我們心中作擔保。
CCBT : 哥林多後書 1
Korintofo II 1
1Efi Paulo a Onyankopɔn ayi no sɛ ɔyɛ Kristo Yesu somafo no ne Timoteo a ɔyɛ yɛn nuanom no baako a wɔde rekɔto Onyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ne ahotefo a wɔwɔ Akaiaman mu no nyinaa anim no nkyɛn. 2 Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo.
3 Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no a ɔyɛ adom Agya na ɔyɛ Onyankopɔn a mmoa nyinaa fi no no ase. 4 Ɔboa yɛn wɔ yɛn amane nyinaa mu na yɛnam mmoa a yɛn ankasa anya afi Onyankopɔn nkyɛn no so atumi aboa afoforo a wɔwɔ amane ahorow mu no. 5 Sɛnea yɛwɔ Kristo amanehunu mu kyɛfa no, saa ara nso na yenya Kristo mmoa a ɛdɔɔso no. 6 Sɛ yehu amane a, efi mo mmoa ne mo nkwagye nti. Sɛ wɔboa yɛn a, na mo nso wɔaboa mo ama mo ahoɔden a monam boasetɔ so betumi agyina amane a yehu na yetumi gyina ano no ano bi. 7 Enti gyidi a yɛwɔ wɔ mo mu no nhinhim. Yenim sɛ, sɛnea mo ne yɛn hu amane no, saa ara nso na mmoa a yenya no, munya bi.
8 Anuanom, yɛpɛ sɛ yɛtwe mo adwene ba ɔhaw a ɛtoo yɛn wɔ Asia mantam mu no so. Amane a yɛfaa mu no so, na na emu yɛ duru enti yɛn asetena mu anidaso nyinaa yerae. 9 Yɛtee nka sɛ wɔabu yɛn kumfɔ. Saa asɛm yi sii sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa yɛn ho nto yɛn ankasa so na mmom, yɛde yɛn ho bɛto Onyankopɔn a ɔma awufo sɔre no so. 10 Wayi yɛn afi saa owu amanehunu yi mu na obegye yɛn. Ɔno na yɛde yɛn ani ato no so sɛ, sɛ mokɔ so bɔ mpae ma yɛn a, 11 obegye yɛn bio. Eyi kyerɛ sɛ, wobebua mpae dodow biara a mobɔ ma yɛn no na Onyankopɔn behyira yɛn, na dodow no ara ama wɔn nne so de ada no ase ama yɛn.
12 Nea yɛhoahoa yɛn ho wɔ mu ne sɛ: yɛn ahonim kyerɛ yɛn sɛ, yɛn asetena wɔ wiase ha, ne titiriw no, ayɔnkofa a ɛda yɛne mo ntam no, fi Onyankopɔn nokware turodoo a efi tumi a efi n’adom mu na emfi onipa nimdeɛ mu. 13 Nsɛm a mubetumi akenkan, ate ase nko na yɛkyerɛw de brɛ mo. Mewɔ anidaso sɛ, mobɛte biribiara a 14 monte ase yiye no ase daakye sɛnea ɛbɛyɛ a da a Awurade Yesu bɛba no, mode yɛn bɛhoahoa mo ho na yɛn nso yɛde mo ahoahoa yɛn ho.
15 Na minim sɛ saa asɛm yi bɛba mu. Ɛno nti na mehyehyɛe sɛ mɛba abɛsra mo na moanya nhyira mpɛn abien. 16 Meyɛɛ m’adwene sɛ, sɛ merekɔ Makedonia a, mɛba mo nkyɛn, na meresan nso a, mafa mo hɔ bio na mabisa mmoa afi mo nkyɛn ansa na makɔ Yudea.
17 Midwen ho yiye na meyɛɛ saa nhyehyɛe yi anaa? Anaasɛ menam wiase kwan so na meyɛɛ saa nhyehyɛe no na matwa me ho aka se, “Yiw, Yiw,” ne “Dabi, Dabi,” wɔ bere koro no ara mu? 18 Sɛnea Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo no, me bɔ a mehyɛɛ mo no nyɛ “Yiw” anaa “Dabi” asɛm.
19 Efisɛ, Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no a Silas ne Timoteo ne m’ankasa kaa ne ho asɛm kyerɛɛ mo no nyɛ “Yiw” ne “Dabi” Nyankopɔn Ba. Yesu yɛ “Yiw” ma Onyankopɔn 20 na ɔno na ɔyɛ “Yiw” ma Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa. Eyi nti na ɛnam Yesu Kristo so nti yɛka yɛn “Amen” de hyɛ Onyankopɔn anuonyam no. 21 Afei Onyankopɔn no ankasa na ɔma yɛne mo tumi gyina pintinn wɔ Kristo mu. Ɔno na ɔsraa yɛn 22 faa yɛn sɛ ne de, ɛnna ɔde ne Honhom Kronkron no hyɛɛ yɛn koma mu de sii nea ɔwɔ ma yɛn nyinaa so dua.
23 Mefrɛ Onyankopɔn sɛ m’adanse. Onim me koma mu. Sɛnea ɛbɛyɛ a mubenya kwan agye mo ahome nti na mankɔ Korinto no. 24 Ɛnyɛ yɛn adwene ne sɛ yɛbɛhyɛ mo ama mo agye biribi adi, efisɛ mugyina pintinn wɔ gyidi mu. Na mmom, mo ahotɔ nti na yɛne mo yɛ adwuma.
NA-TWI : Korintofo II 1